အပြင်ဘက်မှာ အေးတဲ့အခါ ဘာ့ကြောင့် ပိုပြီးဆီးသွားချင်ကြတာလဲ? - Lifestyle Myanmar
အပူချိန်ကျလာတဲ့အခါ ပိုပြီးဆီးသွားချင်တာကို သင်သတိပြုမိပါသလား? ဒါက မိုးတွင်း၊ ဆောင်းတွင်းလို အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာ လူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီး ဇီဝကမ္မကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာ ဒီမသက်မသာ အခြေအနေက ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ ဗဟုသုတအဖြစ် သိရှိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို စတင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ပထမဆုံးသိထားရမှာက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပိုလျှံသောအရည်ကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ အဓိကနည်းလမ်း (၂)ခုရှိပါတယ်။
ချွေးအားဖြင့်- နေ့တိုင်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အပူထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအင်ပေါ် မူတည်တဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်၊ ထို့အပြင် ပူနွေးသော ရာသီဥတုနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေက ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို မြင့်တတ်စေသဖြင့် ချွေးဟာ အအေးပေးစနစ်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။
ဆီးအားဖြင့်- ကျွန်တော်တို့ သောက်သုံးတဲ့ ရေကို အစာခြေစနစ်က စုပ်ယူပြီး သွေးထဲ‌ရောက်သွားပါတယ်။ ထို့မှတဆင့် ပိုလျှံသောအရည်ကို ကျောက်ကပ်က ဖမ်းယူပြီး ဆီးပုံစံဖြင့် ဖယ်ထုတ်ဖို့ ဆီးအိမ်ထဲသို့ ယူဆောင်သွားပါတယ်။
ဒီအချက်ကနေ ကျွန်တော်တို့ ရရှိနိုင်တဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး သုံးသပ်ချက်ကတော့ အေးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ချွေးထွက်နည်းပါတယ်။ ချွေးမထွက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်က ရေထုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက ဆီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
cold diuresis(အအေးကြောင့် ဆီးသွားများခြင်း) ဆိုတာ ဘာလဲ?
အအေးအပူချိန်နှင့် ထိတွေ့တဲ့အခါ ဆီးထုတ်လုပ်မှု တိုးလာပါတယ်။ ပူနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အရည်တွေ စုစည်းနေခြင်းကြောင့် ပိုပြီးဖောင်းနေတာကို သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အရည်တွေ မထိန်းသိမ်းထားတော့ပဲ ကျုံ့သွားပါတယ်။ အပူချိန်ကျလာတာနှင့်အမျှ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့အပူတွေ အရေပြားကတဆင့် ဆုံးရှုံးမှာစိုးတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က အရေပြားဆီသွားတဲ့ သွေးတွေကို လျော့နည်းသွားအောင် သွေးကြောတွေကို ကျုံ့လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါရှိရာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဗဟိုချက်အထိ သွေးကိုပိုပြီး ပို့လွှတ်ခြင်းဖြင့် ခြေဖျားလက်ဖျားအထိ သွေးစီးဆင်းမှုကို လျော့နည်းစေကာ ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ဘာသာသူ အအေးဓါတ်ကို ကာကွယ်ဖို့ တုံ့ပြန်ပါတယ်။ သွေးကြောလေးတွေ ကျဉ်းသွားတဲ့အခါ သွေးစီးဆင်းရတဲ့ နေရာ ကျဉ်းလာပြီး သွေးဖိအားကို တတ်လာစေပါတယ်၊ ကျောက်ကပ်က ဖိအားကို နည်းအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ သွေးထဲက ပိုလျှံတဲ့အရည်တွေကို ဆီးအဖြစ် စစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အအေးကြောင့် ဆီးသွားချင်ခြင်းက ရေငုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ရေအောက်လှု့ပ်ရှားမှုမှာလည်း အဖြစ်များပါတယ်။ နိမ့်သော အပူချိန်နှင့် ရင်ဆိုင်ရတဲ့အပြင် ရေငုပ်သူတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအား အတိမ်အနက် ပြောင်းလဲမှုကို ကြုံရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု (သို့) အရည်သောက်သုံးမှု ကဲ့သို့သော တစ်နေ့ကို ဆီးသွားတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်များစွာ ရှိတာကြောင့် ပုံမှန် အရေအတွက်ကို အတိအကျ ဆုံးဖြတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော် လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ ၆ ကြိမ်(သို့) ၇ကြိမ်၊ ညဘက်မှာ တစ်ကြိမ် ဆီးသွားတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အထူးသဖြင့် ညအချိန်မှာ သာမာန်လူတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး ‌ရေအိမ်ခဏခဏ သွားရတာကို သတိပြု‌‌‌နေမိရင် ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဖို့ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆီးအိမ်အတွင်းမှာ အဆင်မပြေမှု ဖြစ်စေပြီး ခဏခဏ ဆီးသွားချင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အဆောတလျင် ဆီးသွားခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ၎င်းက ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ ပိုးကူးစက်ခံရခြင်း၊ (သို့) ဆီးလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အာရုံကြောပြဿနာများ ၊ကဖိန်းအလွန်အကျွံသောက်သုံးမှုတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရေအိမ်ကို မကြာခဏသွားရတဲ့အပြင် ဆီးသွားတဲ့အခါ ခက်ခဲခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ဆီးထိန်းမရဖြစ်ခြင်း (သို့) ဆီးအရောင်ပြောင်းလဲခြင်း စတဲ့လက္ခဏာများ ရှိပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ် ရယူပါ။
မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ တစ်နေ့လျှင် ဆီးသွားတဲ့အကြိမ် အရေအတွက်ကို သတိပြုရပါမယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ အိပ်ရာထဲမှာ အကြိမ်အနည်းငယ်လောက် ပေါက်ချကြတာ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့် ၎င်းက ဆီးအိမ်ပြဿနာ (သို့) ပုံမှန်ထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု လက္ခဏာများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။